नायिका प्रियंका कार्कीको चौतर्फि गा'ली र आ'लोचना भयो,मेरो स्वतन्त्रता हो भन्दै आ'क्रोशित बनिन(हेर्नुस् भिडियो) — Sindhu Online Post
२०७८ श्रावण १२, मंगलवार १८:४२ गते | २०७८ आश्विन ११ | sindhuonlinepost@gmail.com
प्रकाशित मिति: २०७८ श्रावण १२, मंगलवार १८:४२ गते
नायिका प्रियंका कार्कीलाई फिल्ममा गा लि ,बिहे गर्दा गा लि, गर्भवती हुदा गा लि भएपछि उनलाई नै अचम्म लागेको छ । यो मेरो स्वतन्त्रता हो,मैले गर्भवती भएर मेरो फोटाहरु सार्वजनिक गर्न पाईदैन् भन्ने कहाँ लेखेको छ र ? बिकसित देशहरुमा कुनै रोकावट छिन,तर हाम्रो देशमा भने अनेकन कुरा काट्ने मान्छेहरु छन भन्दै आ क्रोस समेत पोखेकी छिन ।
लोकप्रिय नायिका प्रियंका कार्की गर्भवती छिन ।उनले आफ्नो गर्भावस्था बारे सामाजिक सन्जाल र भलक बाट जानकारी दिइरहेकी छिन । तर उनका फ्यानहरुलाई यो कुरा चित्त नबुझेपछि विभिन्न तर्कलाई प्राथमिकता दिएका छनं यस्तो नगर्दा हुन्न भन्ने प्रश्न छ । उनी भन्छिन मैले कुन नै ग ल्ति गरेको जस्तो लाग्दैन ।
अभिनेत्री प्रियंका कार्की गर्भवती छन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय उनले आफ्ना फोटा र भिडिओ पोस्ट गरिरहेकी हुन्छिन्। उनी आफूले गर्भावस्था ‘सेलेब्रेट’ गरिरहेको बताउँछिन्। तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा राखेका फोटाकै कारण प्रियंका र उनका श्रीमान आयुष्मान देशराज जोशीले आलोचना पनि खेप्नुपरेको छ। कतिपयले गर्भ रहेको पेट देखाएर ‘अंग प्रदर्शन’ गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। अरू धेरैले उनको समर्थन गर्दै शुभकामना दिएका छन्।
प्रियंका भने यी सबै कुराले आफूलाई प्रभाव नपार्ने बताउँछिन्।भन्छिन्, ‘आमा बन्नु एकदम खुसीको कुरा हो। म आफ्नो खुसी बाँड्न मन पराउँछु। म जस्तो छु, त्यस्तै देखाउन पनि चाहन्छु। मैले त्यही खुसी सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकी हुँ। मलाई नराम्रो भन्नुमा मेरो केही दोष छैन। दोष देख्नेको मलाई वास्ता पनि छैन। राम्रो भन्नेहरू पनि धरै हुनु हुन्छ। उहाँहरूको प्रतिक्रिया देखेर मलाई अझ खुसी लाग्छ।’
विदेशतिर, अझ विशेषगरी कलाकार र सेलेब्रेटीहरूले गर्भावस्थाको फोटो-भिडिओ खिच्नु, सामाजिक सञ्जालमा राख्नु, गर्भावस्थाबारे कुराकानी गर्नु सामान्य मानिन्छ। हामीकहाँ भने गर्भावस्था अझै पनि छलफल र कुराकानीको विषय होइन भन्ने मान्यता छ।प्रियंका भन्छिन्, ‘कति धेरै दिदीबहिनीहरूले मलाई गर्भावस्थाबारे सोध्नुहुन्छ।
यसबारे जानकारी होस्, अनुभवहरू बाँडियोस् भनेर पनि म कुरा गरिरहेकी हुन्छ। म गर्भवती हुनुअघि जसरी फोटा राख्थेँ, अहिले त्यसरी नै राखिरहेकी छु। पहिले तारिफ र प्रशंसा गर्नेहरूलाई अहिले किन आपत्ति? गर्भ रहेको पेट किन समस्या भएको हो?’प्रियंकाको गर्भावस्था अनुभव र सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया वरपर रहेर हामीले उनीसँग कुराकानी गरेका छौं।
धन कमाउन बिदेश गएका श्याम तामाङ्गको यस्तो द’र्दनाक अवस्था,मन थामेर हेर्नुस क’ठैबरा(भिडियो हेर्नुस) २०७८ श्रावण १२, मंगलवार १८:४२ गते
११ बर्सिय छोरिलाइ आफ्नै बाबाले पटक पटक क र णि गरे पछि दाइ मिडियामा हेर्नुस भिडियो सहित । २०७८ श्रावण १२, मंगलवार १८:४२ गते
कठै बिचरा पैसा कमाउन बिदेश गएका तामाङ यस्तो अबस्थामा घर फर्किए ।हेर्नुस भिडियो सहित । २०७८ श्रावण १२, मंगलवार १८:४२ गते
छोराहरूको पटकै माया लाग्दैन भन्दै हिड्ने कमला, ना ठोले आ-आफ्नो गरि खाने भनेपछी छोराहरुको माया लाग्छ भन्दै यसरी भा वुक बनिन् ,आफ्ना बा ध्यताहरु यसरी प्रष्ट पारिन् भिडियो हेर्नुस् २०७८ श्रावण १२, मंगलवार १८:४२ गते